Maamulka Gobalka Banaadir oo la wareegay Iskuulka Sheekh Qulateyn ee Degmadda Shangaani – Radio Muqdisho
Maamulka Gobalka Banaadir oo la wareegay Iskuulka Sheekh Qulateyn ee Degmadda Shangaani
Iskuulka Sheekh Qulateyn ee Degmadda Shangaani ku yaala kaas oo si-lacag la’aan ah aay ku dhingtaan ku dhawaad 500 oo Arday ah waxaa Maanta la-wareegay Maamulka Gobolka Banaadir.
Iskuulka ayaa waxaa uu ka kooban yahay Hoose, Dhexe iyo Sare waxaana labadii Sano ee lasoo dhaafay Macalimiinta iyo Maamulka Schoolka ku shaqeynayeen si-tabarucaad ah, kadib markii meesha uu ka baxday Mid kamida Jaaliyadda Soomaaliyeed oo dhanka Dhaqaalaha ka taageeri jiray Iskuulka laga soo bilaabo Sanadkii 2007.
Waxaa Maanta Tagay Iskuulka Sheekh Qulateyn Gudoomiye ku xigeebnka dhanka Arrimaha Bulshadda ee Maamulka Gobolka Banaadir iyo Maamulka Degmada Shangaani kadib Cabasho kasoo gaartay Maamulka iyo Macalimiinta Iskuulka wax ka dhigeeysay.
Cismaan Cabdi Cismaan oo ah Maamulaha Iskuulka Sheekh Qulateyn ayaa wafdigii soo booqday ushegay in Iskuulka aay Dhigataan arday ka badan 500 kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo dhamaantood ku dhigta lacag la’aan, sidoo kale waxuu sheegay Maamulaha in Macalimiinta ka howlgala Iskuulka ay gaarayaan 25 Macalin oo labadii sano ee lasoo dhaafay ku shaqeynayeen sitabaruucaad ah.
Gudoomiyaha Degmadda Shangaani ee Gobolka Banaadir Basma Caamir Axmed ayaa sheegtay in cabasho kagatimid Maamulka iskuulka ay jirto taasi oo u baahan in wax laga qabto .
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ee Dhanka Arrimaha Bulshadda C/laahi Cilmi Ereg waxaa ayaa waxaa uu sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir wixii Maanta kadanbeeya uu lawareegay Iskuulka Sheekh Qulateyn isaga oo u mahad celiyay dadkii intaan soo gaarsiiyay.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sidan oo kale dhowr jeer waxaay uu lawareegay Iskuula si-lacag la’aan ah wax loogu bara ardayda dhigata taas oo qeyb ka ah hiigsiga hormarinta waxbarashada uu doonayaMaamulka Gobalka Banaadir.
Golaha shacabka oo ansixiyay Xubin ka mid noqon doonta Guddiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka
Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha oo Muqdisho ku soo dhoweeysay Ciyaartowda Puntland iyo Jubbaland”+Sawirro